ဗိုလ်ထက်မင်း | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 3
ဗိုလ်ထက်မင်း - ဘာကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေး နီးလျှက်နဲ့ဝေးနေရတာလဲ - အပိုင်း(၃)
ဗိုလ်ထက်မင်း - အမျိုးသားလုံခြုံရေး အမှန်တကယ် စိန်ခေါ်ခံနေရပြီလား - အပိုင်း(၂) နိဂုံး
ဗိုလ်ထက်မင်း - ပြည်သူ့သူရဲကောင်းပုံရိပ်နဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသစ္စာရှိမှု ဘယ်ဟာက ပိုအရေးကြီးပါသလဲ ကိုမင်းအောင်လှိုင် (နိဂုံး)
ဗိုလ်ထက်မင်း - ငြိမ်းချမ်းရေးမြတ်နိုးရင် တပ်မတော်သားများကို ဘာကြောင့် အဓမ္မ စစ်တိုက်ခိုင်းနေရတာလဲ? ၅
ဗိုလ်ထက်မင်း - ဓါးတောင်နဲ့မီးပင်လယ်ကို ၂၁ပင်လုံ ဘယ်လို ကျော်ရမှာလဲ - အပိုင်း ၂
ဗိုလ်ထက်မင်း - စိန်ခေါ်မှူတွေရှိနေတဲ့ အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေး တိုက်တွန်းချက် - အပိုင်း(၄)
ဗိုလ်ထက်မင်း - ပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီဆိုရင် ပြောင်းလဲရေး မဟာဗျုဟာ နည်းဗျူဟာအစီအစဉ် တိုက်တွန်းချက် (၄)
ဗိုလ်ထက်မင်း - လက်နက်ကိုင်ထားမှ ငြိမ်းချမ်းရေးရမှာလား နဲ့မေးခွန်းများ - အပိုင်း(၅)
ဗိုလ်ထက်မင်း - တပ်မတော်ရဲ့ အမျိုးသားနိုင်ငံရေး စစ်မှန်သွားရေး တိုက်တွန်းချက် အပိုင်း(၁)
Myanmar’s State Counsellor Aung San Suu Kyi speaks during Karen New Year celebrations in Naypyidaw on December 29, 2016....
ဗိုလ်ထက်မင်း – စိန်ခေါ်မှုတွေ ကျော်လွှားနိုင်ဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ခွန်အားပေးဝိုင်းရံပေးကြစို့ – ၂
ဗိုလ်ထက်မင်း – စိန်ခေါ်မှုတွေ ကျော်လွှားနိုင်ဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ခွန်အားပေးဝိုင်းရံပေးကြစို့ – ၂ (မိုးမခ) ဇန်န၀ါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၇ ၁၀။ အဆိုပါ Power Game plans အနက် တရုတ်သာ...
ဗိုလ်ထက်မင်း – စိန်ခေါ်မှုတွေ ကျော်လွှားနိုင်ဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ခွန်အားပေးဝိုင်းရံပေးကြစို့ – ၁
ဗိုလ်ထက်မင်း – စိန်ခေါ်မှုတွေ ကျော်လွှားနိုင်ဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ခွန်အားပေးဝိုင်းရံပေးကြစို့ – ၁ (မိုးမခ) ဇန်န၀ါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၇ ၁။ အနောက်တိုင်းမီဒီယာအချို့ဟာ စစ်ရေးသုတေသီ၊ ဆောင်းပါးရှင်တွေရဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့တပ်မတော်အပေါ် တဖက်သတ်ဆန်တဲ့ ဝေဖန်ချက်တွေကို...
ဗိုလ်ထက်မင်း – တပ်မတော်ထဲ ဝင်ချင်စိတ် ဘာကြောင့် နည်းနေရတာလဲ? – အပိုင်း (၃) နိဂုံးချုပ်
တပ်မတော် BGF၊ KNU ၊DKBA တို့ပူးပေါင်း၍ မြ၀တီမြို့နယ် ထုံးတံတားရွာလမ်းခင်း။ ၁၀၊၁၁၊၂၀၁၅ ဗိုလ်ထက်မင်း – တပ်မတော်ထဲ ဝင်ချင်စိတ် ဘာကြောင့် နည်းနေရတာလဲ? – အပိုင်း (၃) နိဂုံးချုပ် (မိုးမခ)...
ဗိုလ်ထက်မင်း – တပ်မတော်ထဲ ဝင်ချင်စိတ် ဘာကြောင့် နည်းနေရတာလဲ – အပိုင်း (၂)
ဗိုလ်ထက်မင်း – တပ်မတော်ထဲ ဝင်ချင်စိတ် ဘာကြောင့် နည်းနေရတာလဲ – အပိုင်း (၂) (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၂၃၊ ၂၀၁၆ ၁၀။ အလားတူ နယ်ဘက်တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရကျောင်းဆင်း(OTS) အရာရှိတွေကိုလည်း အသက်ကြီးလို့ဆိုပြီး မသိမသာ...
ဗိုလ်ထက်မင်း – တပ်မတော်ထဲ ဝင်ချင်စိတ် ဘာကြောင့် နည်းနေရတာလဲ ? အပိုင်း(၁)
ဗိုလ်ထက်မင်း – တပ်မတော်ထဲ ဝင်ချင်စိတ် ဘာကြောင့် နည်းနေရတာလဲ ? အပိုင်း(၁) (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၆ ၁။ တပ်မတော်ရဲ့တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာ W.E (War Establishment) ဖွဲ့စည်းပုံအရ...
ဗိုလ်ထက်မင်း – လက်နက်ကိုင်ထားမှ ငြိမ်းချမ်းရေးရမှာလား နဲ့မေးခွန်းများ – အပိုင်း (၆)
ဗိုလ်ထက်မင်း – လက်နက်ကိုင်ထားမှ ငြိမ်းချမ်းရေးရမှာလား နဲ့မေးခွန်းများ – အပိုင်း (၆) (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၆ (ဈ) အချိန်အတိုင်းအတာထက် ကျော်လွန်လာရင် ငြိမ်းချမ်းရေးစားပွဲကို မရောက်လာနိုင်တဲ့ တိုင်းရင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ အနာဂတ်...
ဗိုလ်ထက်မင်း – လက်နက်ကိုင်ထားမှ ငြိမ်းချမ်းရေးရမှာလား နဲ့မေးခွန်းများ – အပိုင်း(၅)
Photo – CNN ဗိုလ်ထက်မင်း – လက်နက်ကိုင်ထားမှ ငြိမ်းချမ်းရေးရမှာလား နဲ့မေးခွန်းများ – အပိုင်း(၅) (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၆၊ ၂၀၁၆ (ဇ) တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေ အချင်းချင်း၊ တပ်မတော်နဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေ...
ဗိုလ်ထက်မင်း – လက်နက်ကိုင်ထားမှ ငြိမ်းချမ်းရေးရမှာလား နဲ့ မေးခွန်းများ – အပိုင်း (၄)
Than Htay Maung ဗိုလ်ထက်မင်း – လက်နက်ကိုင်ထားမှ ငြိမ်းချမ်းရေးရမှာလား နဲ့ မေးခွန်းများ – အပိုင်း (၄) (မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၆ (ဃ) တပ်မတော်က...
ဗိုလ်ထက်မင်း – လက်နက်ကိုင်ထားမှ ငြိမ်းချမ်းရေးရမှာလားနဲ့မေးခွန်းများ – အပိုင်း(၃)
Senior General Min Aung Hlaing’s facebook, Sept 14th, 2016 ဗိုလ်ထက်မင်း – လက်နက်ကိုင်ထားမှ ငြိမ်းချမ်းရေးရမှာလားနဲ့မေးခွန်းများ – အပိုင်း(၃) (မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၂၁၊...
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် ဝနှင့်မိုင်းလား အထူးဒေသများမှ လူငယ် ၁၀၀ ကျော် တွေ့ဆုံပွဲ (July 29, 2016) ဗိုလ်ထက်မင်း – လက်နက်ကိုင်ထားမှ ငြိမ်းချမ်းရေးရမှာလား နဲ့ မေးခွန်းများ – အပိုင်း(၂) (မိုးမခ)...
ဗိုလ်ထက်မင်း – လက်နက်ကိုင်ထားမှ ငြိမ်းချမ်းရေးရမှာလား နဲ့ မေးခွန်းများ – အပိုင်း ၁
2016 အာဇာနည်နေ့ မြင်ကွင်း ဗိုလ်ထက်မင်း – လက်နက်ကိုင်ထားမှ ငြိမ်းချမ်းရေးရမှာလား နဲ့ မေးခွန်းများ – အပိုင်း ၁ (မိုးမခ) သြဂုတ် ၂၃၊ ၂၀၁၆ ၁။ ယခင်အစိုးရလက်ထက်ကတည်းက အချိန်ယူဆွေးနွေး...
ဗိုလ်ထက်မင်း – ၂၁ရာစု ပင်လုံညီလာခံခရီး အတားအဆီးများ ရှိနေသလား – အပိုင်း ၃
မြန်မာ တပ်ရင်းမှူး နဲ့ KNLA တပ်ခွဲမှူး ဗိုလ်ထက်မင်း – ၂၁ရာစု ပင်လုံညီလာခံခရီး အတားအဆီးများ ရှိနေသလား – အပိုင်း ၃ (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၂၂၊ ၂၀၁၆ ၂၄။...
ဗိုလ်ထက်မင်း – ၂၁ရာစု ပင်လုံညီလာခံခရီး အတားအဆီးများ ရှိနေသလား – အပိုင်း ၂
ထီးခီးဂိတ်တွင် တွေ့ရသည့် KNU တပ်မဟာ ၄ စစ်ဆေးရေးဂိတ် (ကရင်အမျိုးသားမီဒီယာ) ဗိုလ်ထက်မင်း – ၂၁ရာစု ပင်လုံညီလာခံခရီး အတားအဆီးများ ရှိနေသလား – အပိုင်း ၂ (မိုးမခ) ဇူလိုင်...
ဗိုလ်ထက်မင်း – ၂၁ရာစု ပင်လုံညီလာခံခရီး အတားအဆီးများ ရှိနေသလား – အပိုင်း ၁
တနင်္သာရီတိုင်းရှိ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေး စခန်းတခုဖြစ်သည့် ထီးခီးဂိတ်ပြဿနာ နှစ်ဘက်ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းမှုများ ပြုလုပ်ပြီးနောက် (ဧရာဝတီ) ဇူလိုင် ၆၊ ၂၀၁၆ ဗိုလ်ထက်မင်း – ၂၁ရာစု ပင်လုံညီလာခံခရီး အတားအဆီးများ ရှိနေသလား – အပိုင်း...
ဗိုလ်ထက်မင်း ● ပွိုင့်ဖိုက် ငြိမ်းချမ်းရေးလက်နက်ကြီးနဲ့ ၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံ အပိုင်း (၄)
ဗိုလ်ထက်မင်း ● ပွိုင့်ဖိုက် ငြိမ်းချမ်းရေးလက်နက်ကြီးနဲ့ ၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံ အပိုင်း (၄) (မိုးမခ) ဇွန် ၁၀၊ ၂၀၁၆ ၂၈။ UWSA က ပြည်နယ်အဆင့် ရရှိရေး...
ဗိုလ်ထက်မင်း ● ပွိုင့်ဖိုက် ငြိမ်းချမ်းရေးလက်နက်ကြီးနဲ့ ၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံ – အပိုင်း (၃) (မိုးမခ) ဇွန် ၉၊ ၂၀၁၆ ၁၈။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်၊ တပ်မတော်နဲ့...
ဗိုလ်ထက်မင်း – ပွိုင့်ဖိုက် ငြိမ်းချမ်းရေးလက်နက်ကြီးနဲ့ ၂၁ ရာစုပင်လုံညီလာခံ -အပိုင်း (၂)
ဗိုလ်ထက်မင်း – ပွိုင့်ဖိုက် ငြိမ်းချမ်းရေးလက်နက်ကြီးနဲ့ ၂၁ ရာစုပင်လုံညီလာခံ -အပိုင်း (၂) (မိုးမခ) ဇွန် ၈၊ ၂၀၁၆ ၁၀။ လက်မှတ်မထိုးရတဲ့အဖွဲ့တွေထဲမှာ အင်အားအကြီးဆုံးနဲ့ သြဇာပါဝါရှိတြတဲ့အဖွဲ့ နှစ်ဖွဲ့...
ဗိုလ်ထက်မင်း – ပွိုင့် ဖိုက် ငြိမ်းချမ်းရေးလက်နက်ကြီးနဲ့ ၂၁ ရာစုပင်လုံညီလာခံ – အပိုင်း ၁ (မိုးမခ) ဇွန် ၇၊ ၂၀၁၆ ၁။ ပွိုင့် ဖိုက် (.၅) စက်သေနတ်ကြီးဟာ...
ဗိုလ်ထက်မင်း – ပြည်သူ့သူရဲကောင်းပုံရိပ်နဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသစ္စာရှိမှု ဘယ်ဟာက ပိုအရေးကြီးပါသလဲ ကိုမင်းအောင်လှိုင် (နိဂုံး) (မိုးမခ) မတ် ၁၆၊ ၂၀၁၆ ၁၂။ စာရေးသူ ရဲ့ယခင်ဆောင်းပါးဖြစ်တဲ့ပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီဆိုရင်ပြောင်းလဲရမည့်မဟာဗျုဟာနည်းဗျုဟာ အစီအစဉ် တိုက်တွန်းချက်အပိုင်း (၁၂)ထဲမှ လာမည့်...